Little Green Riding Hood, yemahara mutambo wevhiki paApp Store | IPhone nhau
Little Green Riding Hood, yemahara mutambo wevhiki paApp Store
Zvakare zvakare idiki diki eimba ndicho chakanangwa nemutambo wakasarudzwa neApple kurodha mahara kwenguva yakati wandei kusvika China chinotevera, apo vakomana veCupertino vachapa mumwe mutambo kana kunyorera kurodha pasina kubhadhara euro imwe. Little Green Riding Hood, mutambo wakagadzirirwa vana vanosvika makore mashanu ekuberekwa, uyo une mutengo wenguva dzose muApp Store ye 2,99 euros uye chaive chimwe chekushandisa chakazove chikamu cheZvakanakisa zvegore ra2015 muRussia. Little Green Kutasva Hood ibhuku rinofambidzana rakanakira kunakirwa paIpad, idzo idiki idzo dzinofanira kutamba isu tichiverenga kana kungoti pavanenge vachiteerera ivo vasati vavata.
Little Green Riding Hood inotipa mifananidzo yakanaka, iine mavara anonakidza mune yakajeka nyaya ine yakanakisa rondedzero. Iyo nyaya inenge yakafanana neyekutanga yakanyorwa naCharles Perrault umo musikana mudiki, ambuya vake neshamwari dzake vachatiza kubva kune mhumhi ine nzara.
Hunhu hweGreen Green Riding Hood
Vatambi vane rudo vanozotendera vana vedu kuva nenguva yakanaka.
Iwo mavara akagadzirwa naAndrey Gordeev, mubairo-anokunda mugadziri kuCannes.
Iwo maficha emvura anotakura iwo madiki kuenda kune yemashiripiti nyika yenyaya.
Iwo madiki zvakare ane akati wandei mini mitambo yekunakidzwa kana vari kuinakidzwa vasati vaenda kunorara.
Bhuku raambuya rekubika rine huwandu hwakawanda hweresipi kuchengetedza chikafu chine hutano.
Mune iri bhuku rebhuku rinofambidzana, rondedzero yakakosha, uye vanogadzira Little Green Kutasva Hood vakaisona uye inonakidza. Little Green Riding Hood inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch neIOS kubva muchinomwe vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Little Green Riding Hood, yemahara mutambo wevhiki paApp Store
Apple Bhadhara stagnates muSpain zvakare
Apple ndiyo kambani inoyemurwa kwazvo pasirese maererano nemagazini yeFortune